Constipation and Bowel Control in Somali | Continence Foundation of Australia
Constipation and Bowel Control in Somali
Calool adayga xakamaynta mindhicirka
Xaashidaan xaqiiqadu waxay sharxaysaa waxa caluul-adaygu (caloosha oo qofka socon ama saxarada oo adkaata) yahay waxayna soo jeedinaysaa aragtiyo muujinayo sida lagu waanajin karo waxayna kuu sheegaysaa halka laga helli karo kaalmo.
Waa maxay calool-adaygu?
Calool-adaygu waa jaahwareer ku dhaca mindhicirka (saxarada) oo aan si sahal ah ama joogta u soo saarayn saxarada. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Docasha siyaada ah
Awood la’aan inaad saxaradu kaa timaado iyo/ama adiga oo dareema in aan saxaradu si buuxda kaaga imaan.
Waa maxay macnaha looga jeedo ‘joogto’?
Waad qaban kartaa ‘qabasho’ falka mindhicirkaaga ilaa aad ka tagto musqusha
Marka aad fadhido musqusha waxaad bilaabi kartaa inaad saxarooto
Waxaad dareemaysaa inaad faaruqisay mindhcirkaaga
Aadida musqusha inta u dhexaysa 3 jeer maalintii ilaa 3 jeer asbuucii
Inaad ahaato ‘joogto’ way isbedeshaa iyada oo ku xiran qofka.
Maxaa keena calool-adayga?
Faybarka aad qaadato oo cuntada ku yar
Biya aan kugu filnayn oo aad qaadato maalintii
Jimicsi aan kugu filnayn oo aad samayso
Daawo iyo/ama xanuun joojiye oo aad gadato warqad la’aan ama xaallad caafimaad oo aad u daran oo joogto ah
Uurka iyo dhalida ilmaha
Jaahwareer ka jira mindhicirka iyo/ama dhaawac u baahan baaritaan caafimaad oo siyaada ah
Soo dhicid— soo degid iyo/dhicida xubnaha gudaha kuwaas oo faragelin ku sameeya kaadihaysta iyo kantaroolka mindhicirka
Sidee saxaraddu u egtahay?
Saxaradaadu (xaarka) waa inay u ekaataa bunni khafiif ah, qaabka soosayjka, jilicsan laakiin isku dhegan, sahlan inuu soo baxo lehna ur yar. Isku day inaad yeellato noocyada: 3aad ama 4aad ee falka mindhicirka.
Dhibaatooyin guud oo mindhicirka
Daafada saxarada – marka calool adaygu keeno in saxaradu si adag u buuxiso xiidmaha (wadada dheefshiidka) oo riixista caadiga ahi ee musqushuna aanay ku filnayn in saxaradu banaanka u soo baxdo.
Celin la’aanta saxarada (marmarka qaarkood loogu yeero ‘qoynta ama wasakhaynta’) – Kani waa shil-lumitaan kaadida ama xaarka. Kan waxaa sabab u noqon kara mindhicirka (kaas oo kaydiya xaar) oo aad u buuxa, laakiin kani wuxuu noqon karaa sababaha keenay mid ka mid ah. Dhuusada oo la xakamayn karin (‘dabayl’) ayaa badanaa loo arkaa caddaynta celin la’aanta saxarada.
Baawasiir (oo mararka qaarkood loogu yeero ‘piles’) – waxaa keeni kara xanibaada dhaqdhaqaaqa mindhicirka. Culays-saarid (la mid ah kor u qaadida wax culus) wuxuu dhaawacaa xidida malawadka. Kani wuxuu keeni karaa dhiigbax, xanuun ama cuncun.
Malawadka oo soo dega – Tani waxay dhacdaa marka cadaadis joogto ah uu sababo qadar yar oo mindhicirka ahi ka soo baxo dabada, kaas oo ah wareegyo muruqyo ah oo fura ama xira markaan sii daynayno saxarada maraysa mindhicirka.
Sida calool-adaygu wax u yeello xakamaynta kaadi-haysta
Calool-adaygu wuxuu sababaa in kaadi haystaadu da’do ama joogto wax uga soo baxaan. Mindhicirka oo buuxa dhaafa wuxuu yaraynayaa qadarka kaadida ah kaadi haystaadu hayn karto waxaadna dareemaysaa inaad musqusha wax badan adiga oo degdegsan.
Halkaan waxaa ku yaalla shan siyood oo mindhicirkaaga iyo kaadihaystaada looga dhigi karo caafimaad loogana ilaaliyo in calooshu fahdiisato:
Si fiican wax u cun si aad uga dhigto mindhicirkaaga joogto mid u shaqeeya aadna u yeellato miisaan jireed oo caafimaad qaba
Cun cunto caafimaad oo faybarku ku badan yahay (ugu yaraan 30g maalintii).
Cab biyo badan si aad uga fogaato calooshu inay ku fadhiisato kaadi haystuna yeellato dhibsasho
Cab 1.5 -2 Litir (6-8 galaas) oo biya ah maalin walba haddii aan si kale dhakhtarkaagu kuu sheegin. Cabitaanku waa biyaha, cabitaanka furutka, shaaha, kofeega, caanaha, jeliga, iyo icecream-ka.
Maalin walba samay jimicsi si aad uga hortagto callooshu inay ku adkaato kana dhig miisaankaaga mid caafimaad qaba
Ka dhig miskahaaga kuwa xoogan si ay si fiican ugu xakameeyaan kaadi haysta iyo mindhicirka
Codaso xaashida jimicsiga miskaha adigoo wacaya khadka caawimada ee National Continence oo ah 1800 33 00 66.
Dabeecada musqul aadista – Gal musqusha markaad u baahato si aad u faaruqiso mindhicirka si buuxda. Xasuuso inaad nasato.
Hubi booskaaga musqul fariisiga:
Ruugaagu waa in xoogaa kor loo qaadaa waana inay waxyar ka sarreeyaan heerka miskahaaga
Kursiga kortaga ayaa laga yaabaa inaad u baahato si uu kuu gaarsiiyo booska ugu fiican
Arag sawirka hoose si uu kuu sii caawimo
Waxyaallaha caloosha jilciya
Waxyaallaha caloosha jilciyaa waa daawooyin caawima in mindhicirku dhaqaaqiisu debco si looga fogaado inay ku xiranto.
La hadal dhakhtarkaaga wixii ku saabsan isticmaalidiisa.
Guud ahaan, jilciyayaasha caloosha waa in la qaataa keliya muddo gaaban.
Waxaa jira saddex nooc oo caloosha jilciya:
Walxa badiya ‐ Kuwaani waxay badiyaan saxarada (xaarka). Cabida ugu yaraan 6‐8 galaas oo biyo ah maalintii waa muhiim.
Jilciyayaasha furfura ‐ Kuwaani waxay jilciyaan xaarka waxayna sahlaan inuu sahal ku soo baxo.
Dhaqaajiyayaal/jilciyayaasha dhiba ‐ Kuwaani waxay ka dhigaan mindhicirka mid xoog ku shaqeeya iyagoo marinaya saxarada mindhicirka.
Hadii caluul adaygu sii xumaado ama sii socdo, la hadal Dhakhtarkaaga.
Yaa cawimi kara?
Talaabada ugu horraysa oo lagu wanaajinayo xakamaynta mindhicirka waa inaad iska qaado baaritaan oo buuxa celinta waana in uu sameeyaa mihnadle caafimaad.
Mluumaad intaas ka badan
Waxaa jira mihnadlayaal caafimaad oo kala duwan oo kaa caawimi kara inaad wax ka qabato calool fadhiga.
Booqo Dhakhtarkaaga guud ama kan takhasuska ah
Wac kalkaalisada caafimaadka Khadka National Continence Helpline oo ah 1800 33 00 66
Si aad u isticmaasho mutarjum, wac Adeega Afcelinta iyo Tarjumida Qoraalka oo ah (TIS) on 13 14 50